Otú nyefee kọntaktị site Nokia ka iPhone
S60 ngwaọrụ nwere achị ụwa ruo ogologo oge ma ugbu a, agbanwewo. Okwu Mmalite nke android nakwa dị ka mgbanwe Steve Jobs mere ndị Apple inc. mere hụ na ndị handsets na-abịa nso nke ọha na eze. Gara bụ ụbọchị mgbe ndị na-eji ịzụta Nokia E usoro nganga na nsọpụrụ na ugbu a ndị a na ngwaọrụ na-abụghị nanị na-ewere bụzi ihe mgbe ochie ma na-dochie ya iPhone na a ngwangwa ijeụkwụ nke na-eduga ndị ọrụ ọtụtụ nsogbu dị ka kọntaktị transfer si ochie Nokia ngwaọrụ ọhụrụ iPhone. A nkuzi ga-eduzi ndị ọrụ na usoro nke-ebufe kọntaktị site ochie S60 ngwaọrụ ọhụrụ iPhone Idebe na-ele ala nke onye ọrụ nakwa dị ka nyefe usoro.
Part 1: Otu click ekwentị Nokia ka iphone transfer
Part 2: SIM kaadị transfer
Part 3: Google mmekọrịta
Wondershare MobileTrans Bụ doro anya na ihe kasị mma software nke na-abịa na akara na isiokwu nke e nyere ka a na ngalaba nke nkuzi. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ reviews na nke a na-edu onye eziokwu na nke a software omume bụ mfe iji na nwere uru na-na akara na onye ọrụ chọrọ. Iji jide n'aka na ihe kasị mma kwuru na a na nkuzi a nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na-ọkọnọ iji jide n'aka na ọrụ na-eso ya na-arụ ọrụ mere ngwa ngwa, Otú ọ dị tupu ya etinyewe na usoro esonụ bụ ụfọdụ n'ime uru nke software omume:
1.It bụ nchebe iji dị ka e nweghị ígwé ojii technology aka na nke a.
2.It ike ịnyefe fọrọ nke nta 90,000+ kọntaktsị na otu laa.
3. Ọ na-akwado ọhụrụ iOS 9, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 plsu / 6 / 5s / 5/4.
1.Nokia S60 ngwaọrụ
Nzọụkwụ 1.The onye ọrụ kwesịrị ileta ukara website nke Wondershare ibudata usoro ihe omume. The URL nke ga-eduga onye ọrụ ozugbo na omume bụ http://www.wondershare.com/phone-transfer/ na Ozugbo software omume e ebudatara ọ na-gwara iji jide n'aka na ihe omume na-agba ọsọ na-isi interface .
Nzọụkwụ 2.The onye ọrụ kwesịrị jikọọ na ngwaọrụ na kọmputa site na ha na nwoke USB cables iji jide n'aka na software na-achọpụta rụọ ha enweghị ihe ọ bụla nke.
Nzọụkwụ 3.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na "Malite Copy" button na-enwe mere na isi ime ihe nke usoro-butere n'ihi na nke software e ebudatara.
Nzọụkwụ 4.The data transfer ga-ebe ozugbo na otu nyefe na dechara site na otu n'elu ikpo okwu ọzọ usoro nwekwara okokụre.
Nkebi nke 2: SIM kaadị transfer
Ọ bụkwa a mfe usoro nke na-eme n'aka na ndị kasị mma a napụtara ka onye na-eji ya na kasị mma n'ụzọ na nzọụkwụ site nzọụkwụ dị ka eduzi. Ọ nwekwara ike na-ahuta ka a layman usoro dị ka ọ bụ kwa mfe na-eso na maka otu ihe ahụ ọ na-eme ka o kwe ọtụtụ n'ime ọrụ na-eso enweghị ihe ọ bụla hassle na nsogbu.
Ọ bụ abụọ akụkụ usoro na ike ga-agbaso mgbe ndị na-esonụ chọrọ na-emezu:
3.SIM kaadị nwere kọntaktị na-agafere
1 Nyefee Nokia kọntaktị na kaadị SIM
Ọ nwere ike na-ahuta ka akụkụ mbụ nke abụọ akụkụ usoro nke SIM ebufe nke kọntaktị site Nokia ka iPhone. Na-esonụ bụ usoro na nke a.
Nzọụkwụ 1.On ndị Nokia ekwentị onye ọrụ nwere pịa menu bọtịnụ.
Nzọụkwụ 2.Once na menu na-enweta onye ọrụ kwesịrị ka pịa kọntaktị ịga n'ihu.
Nzọụkwụ 3.On ọzọ ihuenyo nhọrọ button bụ na-pịrị.
Nzọụkwụ 4.The nhọrọ nke akara / unmark bụ na-ahọrọ.
Nzọụkwụ 5.Now nhọrọ nke Mark niile nwere na-ahọrọ.
Nzọụkwụ 6.Now ọzọ nhọrọ mkpa bụ-mbadamba.
Nzọụkwụ 7.The ọrụ ugbu a, nwere iji họrọ oyiri nhọrọ.
Nzọụkwụ 8.On ọzọ ihuenyo onye ọrụ nwere iji họrọ Detuo na SIM kaadị nhọrọ rụchaa akụkụ mbụ nke usoro.
2 Nyefee kọntaktị na iPhone
Nke a bụ akụkụ nke abụọ nke usoro nke nwere ike soro site n'ịnọgide na nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1.The ntọala icon bụ na-tapped n'ime menu nke iPhone mgbe inserting SIM kaadị nke Nokia Mobile nke nwere niile kọntaktị.
Nzọụkwụ 2.The mail, kọntaktị na kalịnda nhọrọ bụ mgbe ahụ na-tapped.
Nzọụkwụ 3.On ọzọ ihuenyo onye ọrụ kwesịrị ka enweta "Import kọntaktị SIM" na enweta na mmanya ịrụcha usoro na mbubata niile kọntaktị na iPhone.
Nkebi nke 3: Google mmekọrịta
The nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro na ihe ndị a chọrọ ndị dị ka n'okpuru.
Nzọụkwụ 1.The onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na ekwentị Nokia na jikọọ na PC na OVI Suite na ulo oru ebe onye ọrụ nwere iji họrọ mmekọrịta na mgbe ahụ mmekọrịta nhọrọ.
Nzọụkwụ 2.On ekpe panel onye ọrụ kwesịrị ka họrọ kọntaktị na mgbe ahụ MS ele ihe anya.
Nzọụkwụ 3.On nzọụkwụ ọzọ na mmekọrịta nile button bụ-mbadamba.
Nzọụkwụ 4.The ọma mmekọrịta ozugbo ga-emere ka unde.
Nzọụkwụ 5.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ijikọ iPhone na PC.
Nzọụkwụ 6.Once na e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na iTunes na-ulo oru na Ama taabụ a pịrị mgbe na-ahọpụta ndị ngwaọrụ site n'aka ekpe panel nke usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 7.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji họrọ Google kọntaktị si dropdown na e agbakwunyere n'ime windows na kọntaktị na Soro kpaliri hazi iPhone ma nyefee niile Nokia kọntaktị na iTunes na ya mere iPhone.
Nkebi nke 4: Nokia PC Suite
Ọ bụkwa a nnọọ mfe usoro iji jide n'aka na kọntaktị na-agafere ka fọrọ nke nta ọ bụla ọzọ OS n'ụzọ dị mfe. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa ijide n'aka na na Nokia PC Suite nke a makwaara dị ka OVI ụlọ ebudatara ka usoro tinyere iTunes.
1.OVI ma ọ bụ Nokia PC Suite
Nzọụkwụ 1.The onye ọrụ kwesịrị ka jikọọ Nokia ekwentị na PC na iji eriri USB na mgbe ahụ nwere ẹkedori OVI Suite site ebe nhọrọ nke mmekọrịta na mgbe ahụ mmekọrịta Option bụ na-ahọrọ.
Nzọụkwụ 2.On ekpe panel onye ọrụ kwesịrị ka họrọ kọntaktị na mgbe ahụ MS Outlook nhọrọ nke nwere ike hụrụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 3. Ma mmekọrịta niile button bụ na-kụrụ.
Nzọụkwụ 4.This ga-eme ka n'aka na ndị nile Nokia kọntaktị na-depụtaghachiri ka MS Outlook na ya mere zọpụta na kọmputa.
Nzọụkwụ 1.The onye ọrụ nwere ijikọ iPhone na PC na-ebute nke abụọ na-adọ nke usoro.
Nzọụkwụ 2.The iTunes software bụ-oru iji jide n'aka na ngwaọrụ achọpụtara na Ama taabụ na-enweta.
Nzọụkwụ 3.The ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na "mmekọrịta Address akwụkwọ na Ndi ana-akpo" na-ahọrọ iji jide n'aka na MS Outlook adreesị akwụkwọ na-abụghị nanị synced ma na kọntaktị na-kpọfere iPhone mezue usoro.
Olee otú ịrụzi iPhone Backlight
> Resource> iPhone> otú nyefee Ndi ana-akpo, Music, Photos, Videos & SMS si Nokia ka iPhone